Seedr.cc: yakanakisa yewebhu mutengi kurodha maforoma | Linux Vakapindwa muropa
Seedr: akanakisa webhu mutengi kudhawunirodha nzizi dzatinogona kushandisa mune chero browser mu2020
Kubva pakuonekwa kwayo anopfuura makore gumi nemashanu apfuura, kugovana mafaera pamusoro penzvimbo yeTorrent network (BitTorrent) ndeimwe yesarudzo dzinokurumidza uye dzakachengeteka. Kubva parinotangwa kwaro kwave kwave nerwizi vatengi varipo, senge Azureus (ikozvino Vuze) kana zvimwe zvazvino zvichangoburwa uye zvakawedzerwa zvakadai seTransmission, yazvino ichangopfuura vaburitsa v3.0. Asi chii chinoitika kana tisingakwanise kuisa software pakombuta? Iyo imwe yesarudzo dzakanakisa ndeye Mbeu, sevhisi inotibvumidza isu kuti tiite zvese kubva pawebhusaiti.
Mumwe munhu asati abvunza kuti nei tichida masevhisi akaita saSeedr, tinogona kufungidzira mamiriro akati wandei uko hatigone kurodha torrent client. Semuenzaniso, kana isu tichida kurodha rwizi pakombuta isiri yedu, senge hofisi yedu. Kana, wadii kuzvitaura, mashandiro atinoshandisa anodzivirira aya marudzi ekushandisa, chimwe chinhu chinoitika muIOS uye iyo ichangodanwa zita rekuti IPOSOS. Seedr anoshanda kunyangwe paApple zvishandiso.
1 Maitiro ekudhawunirodha rwizi pamwe neSeedr.cc
2 Inoshanda mune chero bhurawuza, asi iine zvirambidzo
Maitiro ekudhawunirodha rwizi pamwe neSeedr.cc
Chinhu chakanyanya kushata nezveSeedr ndechekuti inoshanda chete nekunyoresa, asi iwo mutengo wakaderera kubhadhara kuti ugone kurodha hova kwese kwese kana pane chero chinhu. Matanho ekutevera angave anotevera:
Isu tinovhura bhurawuza.
Tiri kuenda peji rerojekiti.
Isu tinowedzera email uye password kuti tinyore. Izvo zvakakosha kuisa chaiyo email kana, zvikasadaro, isu hatizokwanise kupedzisa kunyoreswa.
Tevere, isu tinotarisa email inbox, tinowana iyo email, uye tinopedzisa kunyoreswa. Tinogona kumirira kwechinguva uye dzimwe nguva zvingasasvika. Kana zvirizvo, iwe unofanirwa kunyora email kune iyo projekiti yekutsigira timu. Matanho 1 kusvika ku4 haachafanirwe kuitwazve.
Kamwe mukati meiyo huru peji, isu tichaona chimwe chinhu senge iwe uine pazasi pemitsara (pasina iyo yakawedzerwa faira). Zvatinofanira kuita ikozvino kuwana .magnet link. Kunyangwe pangave nezviitiko zvakawanda mukutora rwizi zviri pamutemo, hatigone kutsvagisa mawebhusaiti ekutsvaga .magnet zvinongedzo nekuda kwenyaya dzepamutemo.
Tinoteedzera iyi link .magnet. Kana izvo zvatiinazvo iri .torrent faira, tinogona kuishandura kuita magineti mu Torrent2Magnet.
Tevere, tinodzokera kuSeedr, namatidza chinongedzo panoti "Namatira chinongedzo URL Pano" uye tinya pinda. Zvichawedzerwa sebasa. Sezvauri kuona, ini ndawedzera iyo .magnet kurodha Kubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
Kana iro basa rawedzerwa, isu tinofanirwa kutanga kurodha pasi. Isu tinofambisa iyo inotora pamusoro payo uye sarudzo dzekurodha pasi, kuteedzera kana kudzima dzichaonekwa. Isu tinofanirwa kubaya pane yekutanga icon. Ichazopa isu kurodha pasi iyo faira sekuda kwatingaita kutora chero imwe faira kubva paInternet.
Tinomirira kuti kurodha pasi kupedze.
Chekupedzisira, isu tinodzvinyirira iyo faira, nekuti Seedr anozvimanikidza muZIP.
Inoshanda mune chero bhurawuza, asi iine zvirambidzo
Chinhu chakanakisa nezveSeedr ichocho inoshanda mune chero browser. Sezvo paine masevhisi akafanana pakarepo.io o btrentrent.xyz izvo, kunyangwe ini ndichivimba kuti vanovandudza, vanoshanda pavanenge vachida (kanenge kusamboita), Mbeu inoshanda zvakakwana mumhando dzese dzemabhurawuza, kunyangwe akanyanya kurambidzwa mafoni. Chinhu chega chakakosha kuti chishande zvakananga kubva kubhurawuza ndechekuti inobvumidza kurodha pasi mafaera, chimwe chinhu chinotenderwa neiyo browser ye iPhone.
Iyo yakashata ndeyekuti ine zviyero. Iyo yemahara vhezheni chete inotibvumidza kurodha pasi mafaira anosvika 2GB muhukuru, asi kugona uku kunogona kuwedzerwa kana tikaparadzira izwi nekukoka vanhu kuburikidza neTwitter, email, Facebook kana Pinterest. Kana iwe uchida kubvisa zvese zvinorambidzwa, tinogona kuenda Premium nemhando nhatu dzakasiyana dzekunyorera:
Basic: kwe € 6.95 / mwedzi tinogona kurodha pasi nekukurumidza, tamba mafaera muHD uye simudza cap ku30GB.
Pro: kwe € 9.95 / mwedzi isu tinogona kushandisa zvakavanzika trackers, chengetedza mamwe mafaera, kurodha nekukurumidza uye anokwana 100GB.
tenzi: ye € 19.95 / mwedzi isu tinogona zvakare kukwira Seedr senge network drive kana kunyangwe kushandisa zvinyorwa, kusimudza siringi ku1TB yekuchengetedza.
Zvine musoro, izvo zvinotsanangurwa muchinyorwa chino hazvinyanyi kunakidza kune avo vedu vanogona kuisa mutengi pakombuta yedu, asi zvirokwazvo avo vasingakwanise uye vanozoita Seedr imwe yevanofarira webhu services havafunge zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Seedr: akanakisa webhu mutengi kudhawunirodha nzizi dzatinogona kushandisa mune chero browser mu2020
Yekutanga laptop ine AMD neLinux zvinhu mukati inosvika
Linus Torvalds inoshandura kuenda ku AMD kuti iunganidze nekukurumidza!